Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee dalka oo sheegay in la dhisayo golaha adeegga Garsoorka | Sagal Radio Services
Bishii Maarso ee sanadkii 2015 ayaa Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, wuxuu kala diray guddigii golaha adeegga garsoorka, waxaana xilligaas qaadacay kala diristaas Golaha adeegga Garsoorka.
Baashe Yuusuf oo wareysi siiyay Telefishinka Horn Cable ayaa sheegay inay meel wanaagsan mareyso qorshaha magacaabista golaha adeegga garsoorka, isagoo sheegay in latashiyo badan la gelin doono.
Qorshaha dib u habeynta garsoorka ayuu sheegay inay qeyb ka tahay in la sameeyo golaha adeegga garsoorka, oo garsoorayaal Tayo leh kasoo muuqan doonaan.
Dhinaca kale waxaa uu sheegay in maxkamadda sare ee dalka ay u sii shaqeyn doonto sidii maxkamadda Dastuuriga, haddii ay dhacdo in la isku qabto qodobo dastuurka kamid ah, inta laga dhisayo maxkamadaasi.
Guddoomiye Baashe ayaa shaqada ka joojiyay xubno badan oo ka shaqeynayay maxkamadda sare ee dalka iyo garsoorka gobolka Banaadir, kuwaasoo u badnaa kaaliyayaal maxkamadeed.
Dhamaadkii bishii May ayay aheyd markii Madaxweyne Farmaajo uu magacaabay Guddoomiyaha Maxkamadda Sare Baashe Yuusuf, iyadoo magacaabidaas ay hareeysay muran iyo dood ka timid xubnaha mucaaradka iyo Guddoomiyihii xilka laga qaaday oo ku tilmaamay sharci darro, hase ahaatee markii dambe uu aqbalay, xilkana wareejiyay.